Onye a ma ama Cher, bụ onye na-eme ememe ncheta ụbọchị ọmụmụ ya na May, nwere obi ike na ọ gaghị adị ndụ ịhụ ụbọchị ọmụmụ ya ọzọ. Ya mere, onye ọbụ abụ kpebiri idozi nsogbu niile ya na ihe onwunwe ya. A ga-akwụ ndị ikwu ya ụgwọ ihe dị ka nde dollar 305, na-ede akwụkwọ mgbasa ozi.
Ilekọta ndị a hụrụ n'anya
Dị ka onye na-ahụ maka enyemaka si kwuo, Cher, na-eche na njedebe ya na-abịa nso, ya na ndị na-achọta ya, na-elekọta ụlọ maka ụmụ ya - Cza Bono, onye bụbu nwa agbọghọ, ma gbanwee ala, na Ịlaịja Blue Olmena.
Igwe kpakpando ahutaworị ụlọ a na Beverly Hills maka nwanne ya nwanyị, na-etinye ego na akaụntụ ya, nke ga-eme ka o kwe omume ibi ndụ dị mma.
Mama Sher, onye dị afọ 89 bụ Georgia Holt, na-ebi ugbu a na ya. Onye na-egwu egwu na-eche banyere ya.
Nke a na-enweghị isi: Kim Kardashian ugboro 9 ejidere na-edegharị ihe oyiyi nke Cher!
Cher: ihe nzuzo nke ịma mma na-adịghị mma
Aha ojii: 14 ndị omempụ, nke Oscar merụrụ ọrụ ya
Ihe kpatara egwu
N'afọ 2014, onye nwe Oscar, Grammy na ụgwọ ọrụ ndị ọzọ dị oké ọnụ ahịa nwetara ọrịa nje. N'agbanyeghị ọgwụgwọ oge, ọrịa ahụ kpatara nsogbu dị ukwuu n'akụrụ, site na nke Cher ka na-ata ahụhụ. N'agbanyeghi mmejuputa iwu nile nke ndi dibia, onye a ma ama, ma eleghị anya, agagh enwe ike ilaghachi na njem nleta, dika otu n'ime njem nleta igbu onwe ya, nke o ruru.
Uwe na nkwupụta nke njikọta: otú e si katọọ Jayden Smith na netwọk ahụ
Scarlett Johansson chọrọ ịgba alụkwaghịm na nrọ nke ịlaghachi Hollywood
Ihe omuma nke Salma Hayek
Prince Harry mgbe ọkwa nke njikọ aka na Megan Markle gara maka ọsọ
Maka mgbasa ozi n'okporo ámá Melania Trump ga-eji ụlọ akwụkwọ si Croatia
Taylor Swift kelere onye gbara afọ 96 na Krismas
Onyeisi nke Sweden Karl Philippe kwuru banyere akwụkwọ Instagram-ya na ụbọchị ọmụmụ ya
Chris Pratt na Anna Faris
Ariel Winter ji aka ya aza ndị nkatọ banyere ụzọ ya
Kate Middleton, ndị isi William na Harry ghọrọ ndị ọbịa a ma ama nke Marathon kwa afọ
Angelina Jolie gara Kenya na otu ozi di mkpa dika onye nnochite anya UN
Ndị uwe ojii na-enyo enyo na Kim Kardashian ohi na Paris
Ngwuregwu maka ndị nwoke na ụlọ ọrụ
Ego ole ka calorie dị na obere ego?
Ụkwara nta nke akụkụ anụ ahụ
Nne na-enye nwa ara
Uwe uwe agbamakwụkwọ maka Full 2014
Agbamakwụkwọ na ụdị Slavic
Natalia Vodyanova ghọrọ ihu eco-collection nke ika H & M
Catish Straight Cat
Na-ejikọta daisies na mmiri
Diuretic maka ụmụ nwanyị dị ime
Nri achicha na multivark
7 ihe ncheta di iche iche nye umu anumanu nke ndi mmadu mere
Ebe izu ike nke Bakuriani
Kedu ihe ị ga-eyi uwe mwụda n'ime oghere 2014?
Usoro ohuru nke nwoke na nwanyi